လကုန်ရက်လေးမှာ မိဘတွေ လိုအပ်နေတဲ့အရာလေးတွေ ဖြည့်ဆည်းပေးရင်း ပီတိဖြစ်နေတဲ့ အေးမြတ်သူ – Askstyle
လကုန်ရက်လေးမှာ မိဘတွေ လိုအပ်နေတဲ့အရာလေးတွေ ဖြည့်ဆည်းပေးရင်း ပီတိဖြစ်နေတဲ့ အေးမြတ်သူ
သရုပ္ေဆာင္ မင္းသမီးေခ်ာေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ေအးျမတ္သူ ဟာဆိုရင္ သရုပ္ေဆာင္မႈအပိုင္းမွာ အပိုအလိုမရွိတဲ့ သရုပ္ေဆာင္ကြက္ေတြနဲ႔ ပရိသတ္ေတြကို ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆင္ေပးခဲ့တဲ့ သူတစ္ေယာက္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးခ်စ္ခင္မႈမ်ားစြာကို ရရွိထားခဲ့ရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးခ်စ္ခင္မႈမ်ားစြာကို ရရွိထားခဲ့ရတဲ့ ေအးျမတ္သူ က မိဘေတြနဲ႔ အတူ ေစ်းဝယ္ထြက္ရင္း ေပ်ာ္ေနတဲ့ ပံုရိပ္ကေလးေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ ေအးျမတ္သူက မိဘေတြနဲ႔ အတူ ေစ်းဝယ္ထြက္ရင္း ေပ်ာ္ေနတဲ့ ပံုရိပ္ေလးေတြကို မၽွေဝထားတာပါ။
ေအးျမတ္သူ က ” လကုန္ရက္ေလး ဆို အိမ္ကခေလးေလးေတြ က အျပင္ထြက္ခ်င္ၾကတယ္ရွင့္…..လိုတာေလးဝယ္ရင္း…. စၾက /ေနာက္က်နဲ႔ ဒီအေဖ…ဒီအေမ က်န္းမာေနလို့ မျမတ္ေလး ေပ်ာ္ေနရတာပါ… မျမတ္ေလး လန္းတယ္ဆိုတာ ေဖႀကီး နဲ႔ ေမႀကီး ကို မမွီ ပါဘူးရွင့္…. ခ်စ္တယ္ေနာ္ ” ဆိုၿပီးေျပာထားပါတယ္။
ေအးျမတ္သူ တို႔ရဲ႕ ပံုရိပ္ေလးေတြကို ဆက္လက္ၾကည့္ရူေပးၾကပါဦးေနာ္။
ပရိသတ္ႀကီးလည္း ေအးျမတ္သူ တို႔မိသားစု ရဲ႕ ပံုရိပ္ကေလးေတြကို ပရိသတ္ေတြ သေဘာက်လိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္။ အခ်ိန္ေပးၿပီး ဖတ္႐ႈေပးတဲ့ ပရိသတ္ႀကီးကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရိွပါတယ္။
သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အေးမြတ်သူ ဟာဆိုရင် သရုပ်ဆောင်မှုအပိုင်းမှာ အပိုအလိုမရှိတဲ့ သရုပ်ဆောင်ကွက်တွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ဖျော်ဖြေတင်ဆင်ပေးခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုများစွာကို ရရှိထားခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုများစွာကို ရရှိထားခဲ့ရတဲ့ အေးမြတ်သူ က မိဘတွေနဲ့ အတူ ဈေးဝယ်ထွက်ရင်း ပျော်နေတဲ့ ပုံရိပ်ကလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ဒီတစ်ခါမှာတော့ အေးမြတ်သူက မိဘတွေနဲ့ အတူ ဈေးဝယ်ထွက်ရင်း ပျော်နေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေထားတာပါ။
အေးမြတ်သူ က ” လကုန်ရက်လေး ဆို အိမ်ကခလေးလေးတွေ က အပြင်ထွက်ချင်ကြတယ်ရှင့်…..လိုတာလေးဝယ်ရင်း…. စကြ /နောက်ကျနဲ့ ဒီအဖေ…ဒီအမေ ကျန်းမာနေလို့ မမြတ်လေး ပျော်နေရတာပါ… မမြတ်လေး လန်းတယ်ဆိုတာ ဖေကြီး နဲ့ မေကြီး ကို မမှီ ပါဘူးရှင့်…. ချစ်တယ်နော် ” ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။
အေးမြတ်သူ တို့ရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ဆက်လက်ကြည့်ရူပေးကြပါဦးနော်။
ပရိသတ်ကြီးလည်း အေးမြတ်သူ တို့မိသားစု ရဲ့ ပုံရိပ်ကလေးတွေကို ပရိသတ်တွေ သဘောကျလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။